Archdiocese of Mandalay blog: မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (အပိုင်း ၂)
ပေါ်တူဂီ စစ်ဗိုလ် ဆာလ်ဗာ ဒေါ်ရီ ဘေအီရိုဒေ ဘော်ဆာသည် ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၅၅၀) အကုန် လောက်တွင် ရခိုင်မင်း ရာဇာကြီးထံ ဗိုလ်မှူးအဖြစ် ၀င်ရောက် အမှုထမ်းရာ သူနှင့် တွဲဖက်၍ ဖီးလစ် ဒီဗရစ်တိုနီကိုတီလည်း အမှုထမ်းသည်။ ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၅၉၉-၁၆၀၀) တွင် တောင်ငူနှင့် ရခိုင် ပူပေါင်း၍ ဟံသာဝတီ နန္ဒဘုရင်ကို တိုက်ခုိုက်သည့် အခါ ဖီးလစ်ဒီဗရစ်တိုသည် ရခိုင်ဘက်မှ ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက် ပေးခဲ့သည်။ ရခိုင်ဘုရင်မင်း ရာဇာကြီးသည် ပဲခူးကို အောင်မြင်သော အခါ မိမိအား အကူအညီ ပေးခဲ့သော ဖီးလစ်ဒီဗစရစ်တို ခေါင်းဆောင်သည့် ပေါ်တူဂီတို့အား သံလျင်ဆိပ်ကမ်းကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ဖီးလစ်ဒီဗရစ်တိုသည် သံလျင်ကို ခိုင်ခန့်အောင် တပ်များ ဆောက်လုပ်၍ အင်အားဖြည့် တင်းလျက်ရှိသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဒီဗရစ်တိုသည် သံလျင်တွင် ရှင်ဘုရင် အခေါ်ခံ၍ သီးခြား အုပ်စိုးသည်။ ပုသိမ် ဒလ စသော သင်္ဘောဆိပ်များကိုလည်း သိမ်းပိုက် ထားသည်။ မြန်မာတနိုင်ငံလုံး သိမ်းယူရန် ကြံစည်နေသည်။ ဒီဗရစ်တိုသည် ရိုမင်ကက်သလစ်ဘာသာကို အားပေးသည်။ ဘုရင်ဂျီ ဘုန်းကြီး ကူမာဇာ ယူအန်တိုနီနှင့် အယူတူဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးက ဘုရင်ဂျီ ဘာသာဝင်တို့ကို ဘိသိတ်ပေးသည်။ ၁
ထိုအချိန်မှ စ၍ ပေါ်တူဂီ လူမျိုး အမြောက်အများ သံလျင် နေထိုင်လာကြသည်။ ဂျေဇွိတ်ဂိုဏ်းမှ ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရဗောဗစ် (Fr.Boves)နှင့် ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် ဖါနန်ဒစ်ဇ် (Fr.Femandez)တို့ ရောက်လာ၍ နှစ်အနည်းငယ် ကြာသောအခါ ဘုန်းတော်ကြီး နှစ်ပါး အိန္ဒိယသို့ ပြန်သွားကြသည်။ ၄င်းအသင်းဂိုဏ်းမှ ပင် ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် ဒေဖုန်းဆေးကား (Fr.Defonseca) နှင့် ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် ဒီအေဂိုနူးနစ် (Fr.DiegoNunes)တို့ ရောက်လာကြသည်။ ၂
ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၆၁၂)ခုတွင် ဒီဗရစ်တိုသည် မုတ္တမစား ဗညားဒလနှင့် ရေကြောင်း ကြည်းကြောင်း တောင်ငူသို့ ချီတက် တိုက်ခိုက်သည်။ တောင်ငူတွင် (၁၀)ရက် ခန့်နေ၍ ရွှေနန်းတော်ကို မီးတိုက်သည် ဆင်မြင်း လူသူ ရွှေငွေတို့ကို ယူ၍ သံလျင်ကို ပြန်သည်။ တောင်ငူ ဘုရင် နတ်ရှင်နောင်ကိုလည်း သံလျင်သို့ ခေါ်ဆောင် သွားသည်။ ၃ သံလျင်တွင် နတ်သျှင်နောင် ဘုရင်ဂျီ ဘာသာသို့ဝင်ကြောင်း အဆိုရှိသည်။ ၄
ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၆၀၅)ခုတွင် မဟာဓမ္မရာဇာ (နောက်ဘက်လွန်မင်း) အင်းဝထီးနန်းကို စိုးစံတော်မူုသည်။ (၁၆၁၃)ခုတွင် အနောက်ဘက်လွန်မင်းသည် သံလျင်ကို တိုက်ခိုက် အောင်မြင်သည်။ ဖီးလစ် ဒီဗရစ်တိုကို လျှို၍ သတ်သည်။ ကျန် ပေါ်တူဂီလူမျိုးတို့နှင့် ၄င်းတို့၏ သားမယား အဆက်အနွယ် အပေါ်တူဂီ ခရစ်ယာန် လေးထောင်ကျော်ကို အင်းဝသို့ သုံ့ပန်းအဖြစ် ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ သံလျင်မှ အင်းဝသို့ သွားသော ခရီးလမ်းမှာ နှိပ်စက်ခြင်း အမျိုးမျိုး ခံကြရသည်။ ၅ ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် ဒီအေဂိုနူးနစ် (Fr.Diego Nunes) မှာ ညှင်းပန်း နှိပ်စက်မှု ဒဏ်ကြောင့် သံလျင် အင်းဝခရီးတွင် ပျံလွန်တော်မူသည်။ ၆
ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် ဒေးဖုန်းဆေးကား (Fr.Defonseca)က အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဂိုအာမြို့ရှိ၊ ဘုရင်ခံထံသို့ အင်းဝမှ (၁၆၁၆)ခု၊ ဒီဇင်ဘာ (၂၉)ရက် နေ့စွဲဖြင့် ရေးသား ပေးပို့သောစာ၏ တစိတ်တသေကို အောက်ပါအတိုင်း ဖေါ်ပြပါသည်။ ပဲခူးမြို့ ပျက်စီးရခြင်း အကြောင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ခရစ်ယာန် (၅၀၀၀) ကျော် အဖမ်းခံရခြင်း၊ အကြောင်းရင်း အမှန်ကို အရှင်မင်းမြတ်၏ တိုင်းပြည်၏ အကျိုးအတွက် သိရှိစိမ့်သောငှာ ရေးသား ဖေါ်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သံလျင်မြို့ကို မဟာ ဓမ္မရာဇာ အနောက်ဖက်လွန်မင်းသည် ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၆၁၃) ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၀)ရက် မှ မတ်လ (၂၇)ရက်နေ့ အထိ ၀ိုင်းဝန်း ပိတ်ဆို့ တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြသည်။ အင်အား မမျှ၍ သံလျင်မြို့ ကျဆုံးရာ ကျွန်ုပ်တို့ ခရစ်ယာန်များ အားလုံးကို ကျေးကျွန်များ အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံရပါသည်။ ကျွန်ုပ်နှင့် ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် ဒီအေဂိုးနူးနစ်တို့လည်း သံခြေကျင်း အခတ်ခံ ရပါသည်။ အဆိုးဝါးဆုံး ရက်စက် ကြမ်းကြုပ်သည့် ညှင်းပန်း နှိပ်စက်မှုကို ခံကြရပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော် ထင်ရှားစေရေး အတွက် အံကြိတ် ခံခဲ့ကြရပါသည်။ ပထ၀ီ မြေကြီးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မွေ့ရာနှင့် ကုတင်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ အစာ အတွက် တစ်နေ့လျင် ဆန်ပြုတ် တစ်ခွက် ရရှိပါသည်။ မြန်မာ စစ်သားများကလည်း ၄င်းတို့၏ ဘုရင် နှစ်ချိုက်စေရန် လူများရှေ့တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား မကြာခဏ ရိုက်နှက်လေ့ ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား လက်နက်ချ အညံ့ခံရန် ငြင်းဆန်သူများဟု စွပ်စွဲလျက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပါးများကို လက်ဝါးဖြင့် ရိုက်ပါသည်။ မျက်နှာကိုလည်း မကြာခဏ လက်သီးနှင့် ထိုးပါသည်။ အစာငတ် ရေငတ်ဖြင့် အင်းဝသို့ ရောက်သော အခါတွင်လည်း ရက်စစ် ကြမ်းကြုတ်စွာ ညှင်းပန်း နှိပ်စက်မှုကို ခံစားကြရပါသည်။ မင်းစုိုး ရာဇာ အမျိုးသမီးများသည် ၄င်း၊ သာမန် အမျိုးသမီးများသည် ၄င်း၊ ငတ်လွန်း လှသဖြင့် တအိမ်တက်ဆင်း တအိမ်တက် တောင်းရမ်း စားသောက် ကြရပါသည်။ မိသားစုများမှာလည်း မယား တကွဲ သားတကွဲ ဖြစ်နေ ကြရပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းအာနုဘော်တော်ဖြင့် ပြန်လည် ရရှိမည့် လွတ်လပ်ရေး အတွက် ယုံကြည် ကိုးစားစွာဖြင့် ဆုတောင်းရင်း ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်လျက် ရှိကြပါသည်။ ၇ ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် ဒေဖုန်းဆေးကားသည် အင်းဝတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ စစ်အကျဉ်းသား အဖြစ် နေထိုင်ရ၍ ခရစ်ယာန် (၅၀၀၀)ကျော် တို့ကို စောင့်ရှောက်ရသည်။ ၈
ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၆၂၈) တွင် မဟာဓမ္မရာဇာ (အနောက်ဘက်လွန်မင်း) သည် ဟံသာဝတီ ပဲခူးချောင်းသစ် အနောက်ဘက် ယာယီ စံနန်းတော်၌ နေထိုင်စဉ်သားတော် မင်းရဲဒိဗ္ဗ လုပ်ကြံ၍ အနိစ္စရောက်သည်။ အနောက်ဘက်လွန်မင်း၏ ညီဖြစ်သော သတိုးဓမ္မရာဇာ (သာလွန်မင်း)သည် ဟံသာဝတီ ပဲခူးတွင်မင်း ဖြစ်လာသည်။ သာလွန်မင်းသည် ပထမဦးစွာ ဟံသာဝတီကို နေပြည်တော်ပြု၍ လေးနှစ် ပတ်လုံး ပြည်ရေး ရွာမှုစီရင်ပြီး (၁၆၃၃) တွင် ဟံသာဝတီ နေပြည်တော်၌ ဘိသိတ်ခံသည်။ ၉
ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၆၃၅) တွင် သာလွန်မင်းသည် မြန်မာ နေပြည်တော်ကို အင်းဝသို့ ရွှေ့ပြောင်း တည်ထောင်သည်။ ၁၀ သာလွန်မင်းသည် (၁၆၃၅)ခု စက်တင်ဘာလ အတွင်း၌ ဒတ်ကုန်သည်များ ဖြစ်သော ဒီရက်စ်တွိုင်းရဲ နှင့် ဗီဒယဲရတ်ဆိန် ပေါပတာ (Dirck Steur and Wiert Jansen Popta) တို့ကို အင်းဝ နန်းတော်၌ တွေ့ဆုံ လက်ခံ၍ ကောင်းမွန်စွာ လက်ခံသည်။ ၁၁ လစ္စဘွန်းမြို့ (၁၆၉၅) က ဘုန်းတော်ကြီး သြဂုတ်စတင်း ဒေဂျေဇူး (Fr.Augustin De Jesu) ရေးခဲ့သော မှတ်တမ်းတွင် (၁၆၃၅) ခုနှစ် သူ အင်းဝ ရောက်စဉ်က သံလျင်မှ ဖမ်းလာသော ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် (၄၀၀၀) ကျော်ကို အင်းဝ၌ တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ ၁၂
သာလွန်မင်း ထီးနန်း စိုးစံစဉ် အင်းဝ နေပြည်တော်တွင် နိုင်ငံခြားသားများ များပြား လာသည်ကို စိုးရိမ်တော်မူသဖြင့် စစ်မှုထမ်းရာ၌ အသုံးဝင်သည့် လူအချို့နှင့် အကြီးအကဲများကို နန်းတော်၌ ဆက်လက် အမှုထမ်းစေ၍ ကျန်လူများကို စစ်ကိုင်းနယ် ပရိမ္မသို့ ရှေးဦးစွာ ပို့ဆောင်ပြီးနောက် ချင်းတွင်းမြစ်နှင့် မူးမြစ် အကြား ရွာများသို့ ပို့ကာ မိမိတို့ ဘာသာကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့် ပြုထားသည်။ ၄င်း အချိန်မှာပင် ယိုးဒယားသို့ ချီတက် တိုက်ခိုက်ရာ၌ ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့သည့် အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ဒတ်ခ်ျတို့ကို မူလ ရှိရင်း ပေါ်တူဂီများနှင့် အတူ နေရာ ချထားခဲ့သည်။ ၁၃ ၄င်းတို့ ဘာသာ ထုံးစံအတိုင်း ဘုရင်ဂျီ လူမျိုး သာသနာပြု ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် ကိုးကွယ် နေထိုင်ကြရသည်။ ၄င်းတို့ နေထိုင်ရာ ရွာများကို ဘုရင်ဂျီရွာ (ဖရင်ဂျီ)ရွာများဟု ယခုတိုင် တွင်သည်။ ထိုဘုရင်ဂျီတို့ အဆက်အနွယ်က ယခုအခါ (၂၄၀၀) ခန့် ရှိသည်။ သုံ့လူ ပေါ်တူဂီလူမျိုးတို့ကား မြန်မာမင်း အဆက်ဆက်တို့တွင် အမြောက်သား အဖြစ် အမှုထမ်း ကြသည်။ နောင်မင်းတို့ လက်ထက် သုံ့ပန်းဖြစ်သော ကုလားဖြူ လူမျိုးတို့ကိုလည်း ထိုဘုရင်ဂျီ ရွာများသို့ ပို့၍ နေထိုင်စေသည်။ ၁၄
မြန်မာနိုင်ငံ အထက်အညာ ဒေသသို့ ပေါ်တူဂီ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်များ ပထမဆုံး စတင် ရောက်ရှိသည့် ခုနှစ် သက္ကရာဇ်နှင့် ပတ်သက်၍ (၁၈၆၁) ခုနှစ်တွင် ဆရာတော်ကြီး ဘီဂန်းဒက်သည် ဘုရင်ဂျီ ရွာများသို့ လှည့်လည် သွားရောက်၍ ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှု ခဲ့သည်။ ဆရာတော်ကြီးသည် ဘုရင်ဂျီရွာတိုင်းရှိ အစဉ်အဆက် မှတ်သား ထားတတ်ကြသော လူကြီး သူမများကို ပေါ်တူဂီ ခရစ်ယာန် ဘိုးဘွားများ ပထမဆုံး ရောက်ရှိသည့် အချိန်ကာလကို မေးမြန်း စုံစမ်းခဲ့ရာ ကက်သလစ် ဘိုးဘွားများ ဤရွာများသို့ ပထမဆုံး ရောက်ရှိခဲ့ကြသော အချိန် ကာလမှာ မြန်မာသက္ကရာဇ် (၉၉၉) ဖြစ်ကြောင်း ဘုရင်ဂျီ ရွာတိုင်းမှ တူညီသော အဖြေကို ရရှိသဖြင့် ဤ ဘုရင်ဂျီ ရွာများသို့ ပထမဆုံး ပေါ်တူဂီ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်များ ရောက်ရှိလာသည့်နှစ် အတိအကျမှာ မြန်မာသက္ကရာဇ် (၉၉၉) ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၆၃၇) ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ၁၅
၁။ အခြေပြမြန်မာနိုင်ငံရေး သမိုင်း၊ ပထမတွဲမြန်မာ ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ မူပိုင်။ စာပေ ဗိမာန် ပုံနှိပ်တိုက်၊ ပထမ အကြိမ် (၁၉၇၀) စာမျက်နှာ ၄၀၄-၄၁၀ နောင် ဤ စာအုပ်ကို ကိုးကားလျင် အခြေပြနိုင်ငံရေး သမိုင်း ပတွဲ ဟုဖေါ်ပြမည်။
၂။ ကက်သလစ် အသင်းတော် ရာဇ၀င် အကျဉ်းချုပ်၊ ကက်သလစ် ပုံနှိပ်တိုက် ၊တောင်ငူ (၁၉၆၂) စာမျက်နှာ ၃၁၉ ၊နောင် ဤ စာအုပ်ကို ကိုးကားလျင် ကက်သလစ် ရာဇ၀င်ဟု အတိုဖေါ်ပြ မည်။
၃။ အခြေပြနိုင်ငံရေး သမိုင်း၊ ပတွဲ စာမျက်နှာ ၄၁၄
၄။ ဦးဘသန်း ကျောင်းသုံးမြန်မာ ရာဇ၀င် စာမျက်နှာ၂၄၂
၅။ ကက်သလစ် ရာဇ၀င် စာမျက်နှာ - ၃၂၀
၆။ The Annual Letter of 1615, The Voice, Dec,1926.
၇။ The letter from Fr.De Fonseca, The voice, Dec,1926.
၈။ Extract from the annual letter of 1620.The voice,1926.
၉။ အခြေပြုနိုင်ငံရေး သမိုင်း ပထမတွဲ စာမျက်နှာ ၄၂၅-၂၈
၁၀။ ခင်မြကြူ ၊ဒေါက်တာ၊ ကုန်းဘောင်ခေတ် ၊ပြင်သစ်မြန်မာ ဆက်ဆံရေး သမိုင်း ဒီဇင်ဘာလ ၁၉၇၆၊ ပထမနှိပ်ခြင်း စာပေဗိမာန် ပုံနှိပ်တိုက် ရန်ကုန် စာမျက်နှာ ၂။ န၀မတန်းမြန်မာ သမိုင်း စာမျက်နှာ-၅၄
၁၁။ အခြေပြုနိုင်ငံရေး သမိုင်း ပတွဲ စာမျက်နှာ -၄၃၈
၁၂။ The voice,oct,1941,p-12
၁၃။ The voice,sept,1941
၁၄။ ဦးဘသန်းကျောင်းသုံးမြန်မာ ရာဇ၀င်၊ စာမျက်နှာ -၂၇၁
၁၅။ Biganaet,An outline of the History of the catholic Burmese Mission, From the year 1720 to 1887 printed at Hanthawaddy press,1887 p-8 နောင် ဤစာအုပ်ကို ကိုးကားလျင် Bigandet, Catholic Burmese Mission ဟုအတိုဖေါ်ပြမည်။
အထက်မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘုရင်ဂျီ ရွာကြီးများတွင်
နေထိုင်ကြသော ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များကို
ကြည့်ရှု ထိန်းသိမ်းရန် လာရောက်ခဲ့ကြသည့် နိုင်ငံခြား သာသနာပြု ရဟန်းဘုန်းတော်ကြီးများ
Fr. De Fonseca (Jesuit)
ဂျေဇွိတ် ဂိုဏ်းမှ ဘုန်းတော်ကြီးများ ဖြစ်ကြသော ဖါသာရ် ဒေဖုန်းဆေးကားနှင့် ဖါသာရ် ဒီအေဂိုနူးနစ်တို့သည် သံလျင်တွင် ဖီးလစ်ဒီဗရစ်တို အုပ်စိုးသည့် အချိန်က ပေါ်တူဂီ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်များကို ကြည့်ရှုရန် ရောက်ရှိ လာခဲ့ကြသည်။ (၁၆၁၃) ခုနှစ်တွင် မြန်မာဘုရင် အနောက်ဘက်လွန်မင်းသည် သံလျင်ကို တိုက်ခိုက် အောင်မြင်၍ ဖီးလစ် ဒီဗရစ်တိုတို့ကို ကွပ်မျက် ခဲ့သည်။ သံလျင်ရှိ ပေါ်တူဂီ ခရစ်ယာန်(၄၀၀၀) ကျော်ကုို စစ်သုံပန်း အဖြစ်နှင့် အင်းဝသို့ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဖါသာရ် ဒေဖုန်းဆေးကားနှင့် ဖါသာရ် ဒီအေဂိုဒူးနစ်တို့လည်း ပေါ်တူဂီ ခရစ်ယာန်များနှင့် အတူ စစ်သုံပန်း အဖြစ် ပါရှိခဲ့ကြသည်။ ဖါသာရ် ဒီအေဂိုနူးနစ်သည် ဗမာ စစ်သားများ၏ ညှင်းပန်း နှိပ်စက်မှု ဒဏ်ကြောင့် သံလျင်နှင့် အင်းဝ ခရီး၌ပင် ပျံလွန် တော်မူသည်။ ဖါသာရ် ဒေဖုန်းဆေးကားသည် အင်းဝတွင် နှစ်ပေါင်း များစွာ စစ် အကျဉ်းသားအဖြစ် နေထိုင် ကြရသော ပေါ်တူဂီ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်များကို ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ ပေါ်တူဂီ ခရစ်ယာန်များကို မူးမြစ်နှင့် ချင်းတွင်းမြစ် အကြား ရွာများသို့ ပို့သောအခါတွင်လည်း ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များ နှင့် အတူ လိုက်ပါ၍ ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်ခဲ့သည်။ ဖါသာရ် ဒေဖုန်းဆေးကားသည် ဘုရင်ဂျီ ရွာကြီး (၈)ရွာတွင် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း (၃)ကျောင်း ဆောက်လုပ်၍ (၂၆)နှစ်တိုင်တိုင် ဘာသာဝင်များကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် ခဲ့သည်။ ၁
၁။ (က) The voice,Dec,1926 (ခ) The annual letter of 1615 (ဂ) ကက်သလစ်ရာဇ၀င် စာမျက်နှာ ၃၂၀
(Fr. Denis Atumes)(Jesuit)
ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် ဒေဖုန်းဆေးကား နောက်တွင် ဂျေဇွိတ်အသင်းမှ ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် ဒေနိစ် အာတူးမက်စ် ရောက်လာသည်။ ဤဘုန်းတော်ကြီးသည် အသက်အရွယ် နုပျို၍ ရဲရင့် ဖြတ်လတ် သူ ဖြစ်သည်။ ဘုရင်ဂျီ ရွာကြီး (၈)ရွာကို လှည်လည် ကြည့်ရှု ရသည်။ ဖါသာရ် အာတူးမက် လက်ထက် ဘုရင်ဂျီရွာကြီး (၈)၇ွာတွင် နေထိုင်ကြသော ဘာသာဝင် ဦးရေမှာ အင်းဝ (၁၅၀)။ နဘက် (၃၀၀)။ လက်တော်ရာ ချောင်းဦး(၄၀၀)။ မုဆိုးဘို ရွှေဘို (၇၀)။ အာလံ ဟလင်း (၆၀)။ ဆီကိမ် သစ်ဆိမ့် (၂၀၀)။ စဉ်ဂွင်၊ စဉ့်ဂူ (၈၀)တို့ ဖြစ်ကြ လေသည်။ ဖါသာရ် အာတူးမက်စ်သည် (၅)နှစ် ကြာသောအခါ အိန္ဒိယသို့ ပြန်ကြွ သွားသည်။ ၁
၁။ ကက်သလစ် ရာဇ၀င်၊ စာမျက်နှာ ၃၂၁
ဖါသာရ် စီမောင်ရော ဒရီဂဲဇ်
Fr. Simon Rodrigues (Jesuit)
သက္ကရာဇ် (၁၆၅၂) ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယရှိ ဂျေဇွိတ်အသင်းမှ ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် စီမောင်ရောဒရီဂဲဇ် ရောက်လာသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဖါသာရ် ဒေဖုန်းဆေးကားမှာ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်ပြီဖြစ်၍ ဘုရင်ဂျီ ရွာကြီးများကို ဖါသာရ် စီမောင်ရောဒရီဂဲဇ် အုပ်ချုပ်ရသည်။ ၄င်း ဘုန်းတော်ကြီး နောက် ဂျေဇွိတ်ဂိုဏ်းမှ ရဟန်းတော်များ ရောက်လာခြင်း မရှိတော့ပေ။ သံလျင်၊ ပဲခူး၊ မုတ္တမ၊ ရခိုင်ပြည်များတွင် နေထိုင်ကြသော ပေါ်တူဂီ ခရစ်ယာန်များကိုမူ ပေါ်တူဂီ ဘုန်းကြီး အချို့လာရောက် ကြည့်ရူ ကြသည်။ ၄င်း ဘုန်းတော်ကြီးတို့သည် သာသနာ ပျံ့ပွားရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုကြပေ။ ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၆၉၀) ပြည့်နှစ်တွင် ပြင်သစ်ပြည် ပါရီမြို့ သာသနာပြု အသင်းဂိုဏ်းမှ ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ်ဂျေနိူး (Fr.Joret) တို့ ယိုးဒယားပြည်မှ ပဲခူးသို့ ရောက်လာကြ၍ သာသနာပြု လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ကြရာ အောင်မြင်မှု ရရှိငြားသော်လည်း ပေါ်တူဂီ လူမျိုးတို့၏ ဂုံးချောမှုကြောင့် တောတောင် ထူထပ်သော နေရာသို့ နှင်ထုတ်ခြင်း ခံရသည်။ ၁
၁။ ကက်သလစ် ရာဇ၀င်၊ စာမျက်နှာ ၃၂၁ - ၃၂၂
Fr. Genoud and Fr.Joret (Paris Foreign Mission)
ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၆၉၂) ခုနှစ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီး နှစ်ပါးတို့သည် ပဲခူးမြို့ အနီး ညောင်ဝိုင်းရပ်၊ ပဲခူး ချောင်းနားတွင် ဆင်းရဲ ဒုက္ခ္ခ ခြိုးခြံစွာနှင့် တရားကျင့်လျက် ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် တရား ဒေသနာတော်ကို ဟောပြော သီတင်းသုံးလျက် ရှိသည်။ ထိုစဉ်က ပဲခူးမြို့သည် ရွာငယ်မျှသာ ဖြစ်၍ ညောင်ဝိုင်း အရပ်သည် တော အတိသာ ဖြစ်နေ၏။ ထိုဘုန်းတော်ကြီးများ သီတင်း သုံးရာဒေသသို့ ထိုအရပ် ဒေသမှ သားအဖ နှစ်ဦးတို့သည် ဟင်းချက် စရာ အသီးအနှံ ရှာရင်း ရောက်ရှိလာကြသည်။ ထိုတော်ထဲတွင် သားဖြစ်သူကို မြွေ ကိုက် ခံလိုက်ရသဖြင့် ဖခင် ဖြစ်သူမှာ လက်မှိုင်ချလျက် နေသည့် အတွင်း ထိုဘုန်းကြီး နှစ်ပါးနှင့် တွေ့၍ ဆေးကု ပေးရာ ကောင်းမွန်စွာ ပျောက်ကင်း သွားသည်။ ထိုအခါ လယ်သမား သားအဖ နှစ်ယောက်တို့သည် အားရ ၀မ်းသာစွာနှင့် အိမ်မှာ ဆောင်ထားရန် ဆေးနည်း ပေးပါ။ ဆရာကြီးတို့ ကျေးဇူးကို ဘယ်အခါမျှ မမေ့ပါ၊၊ ကျေးဇူးကြီး လှပါသည်ဟု တောင်းပန်ကြသည်။ ဘုန်းတော်ကြီး နှစ်ပါးမှ ပြန်ပြောသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အသင့် ဖေါ်စပ်ထားသော ဆေး မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ တန်ခိုး ကျွန်ုပ်တို့၏ အစွမ်းသတ္တိနှင့် သင်တို့ အသက် ချမ်းသာသည် မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်သော ဘုရား၏ ဟုတ်မှန်သော ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ သင်တို့ အသက် ချမ်းသာရသည်။ သင်တို့အား တိုက်ကျွေး ပက်ဖျန်းသော ရေသည် ဘုရားသခင် စီမံ ထားသော ပရိတ်ရေများ ဖြစ်သည်။ သင်တို့ ကိုယ်၌ လိမ်းပေးသော ဆေးများသည၊်လည်း ဤတော်ထဲ၌ ရှိသော သစ်ပင် အမျိုးမျိုးတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ဆေးပင်များ ဖြစ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ စကားကို ယုံ့ကြည် နားထောင် ကတိ သစ္စာ တည်ကြည်သော သူများသည် ဆေးဝါး လိုက်တတ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ အကြောင်း မျိုးစုံတို့ကို သားအဖ နှစ်ဦးတို့အား ကောင်းမွန်စွာ နားလည်အောင် သွန်သင် ပြသ ဟောပြောရာတွင် ၄င်းတို့သည် စိတ်အား ထက်သန်ခြင်းနှင့် သဒ္ဓ္စါ ကြည်လင်စွာ ကိုးကွယ်ပါမည်။ ဆရာကြီးတို့ တရားများကို ပြောပြပါဟု အမျိုးမျိုး တောင်းပန်ကြသော အခါ ဘုန်းတော်ကြီး နှစ်ပါးက သင်တို့ အခု ချက်ချင်း မဖြစ်နိုင်သေးပါ ကျွန်ုပ်တို့ ဆိုသော ဆုတောင်း မေတ္တာများကို သင်ကြား ပေးမည်။ ကောင်းမွန်စွာ ရရှိအောင် ကျက်မှတ်ရမည်။ မှတ်မိသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ဆီ ပြန်လာပါဟု မှာကြား လိုက်လေသည်။ ထို သားအဖ နှစ်ယောက်တို့သည် အိမ်ကို ပြန်ရောက်၍ အကြောင်းမျိုးစုံကို အားရ ၀မ်းသာစွာနှင့် ပြန်ပြောသောအခါ တစ်ယောက်စကား တစ်ရာကြားသဖြင့် သတင်းပျံ့ သွား၏ တခြား ရောဂါ ကပ်ရောက်သူ စုန်းပူး နတ်ပူးသော သူတို့သည်လည်း ထိုဘုန်းတော်ကြီး (၂)ပါးထံ သွားရောက် ကုသ ကြသည်။ ရောဂါ ပျောက်ကင်းသော လူမမာ တို့သည် ဘုရင်ဂျီ ဘုန်းကြီး (၂)ပါး၏ ကြင်နာ သနားတတ်ခြင်းနှင့် ပညာရှိခြင်း အကြောင်းကို အနီးအဝေး အရပ်များတွင် ပြောကြားခြင်းကြောင့် မင်းမှုထမ်း အရာရှိများနှင့် တရားသူကြီးများပင် နာမကျန်း ရှိသော မိမိတို့၏ ဆွေမျိုးသားချင်းတို့ကို ဘုန်းတော်ကြီးများ ထံသို့ ခေါ်ဆောင် လာခဲ့ကြသည်။ ၁
မိမိတို့ ပင်ပန်းစွာ တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်သော ရပ်ကွက်သစ်၌ မိမိတို့ ခံစားရသော ယုံကြည် ကိုးစားခြင်းသည် သေ၀နီး ကလေး များစွာတို့ကို ဆေးကြောရန်နှင့် လူကြီးများကို တရားဟောရန် အခွင့်ကို ပြုလုပ် နိုင်လေသည်။ ဤကဲ့သို့ စည်ကား လာသဖြင့် ဘုရင်ဂျီ သာသနာ၏ ဗဟိုရ်ဌာန တစ်ခု ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် အခြေသို့ ရောက်လာလေသည်။ ဘုန်းတော်ကြီး နှစ်ပါးတို့သည် ဆေးကုသ ပေးကြရင်း ဟုတ်မှန်သော ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် တရားတော် ဟောပြော ကြသဖြင့် လူ ပရိတ်သတ်များ တို့သည် နှစ်ချိုက်စွာ နှင့် တရားတော်ကို နာယူကြ၍ ဘုရားသခင် ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို ချီးကျူး ကြလေသည်။ ဤနည်းဖြင့် လူ ပရိတ်သတ်များသည် တနေ့ထက် တနေ့ တိုးပွား၍ များပြားလာ လေရာ၊ မလိုသော သူများသည် စည်းဝေး တိုင်ပင်ကြပြီး ဘုရင့်ထံ ဂုံးတိုက် သံတော်ဦး တင်ကြသည်။ ဘုရင်သည် အကြောင်းမျိုးစုံကို သိရလျှင် လူ ပရိတ်သတ်များအား တရား မဟောရ၊ အသင်း ကြီးပွားအောင် မလုပ်ရ၊ ဘာသာ မသွင်းရ၊ ဆေးတမျိုးတည်းသာ ကုသရမည်ဟု အမိန့်ချ လိုက်သည်။ ဘုန်းတော်ကြီး နှစ်ပါးတို့က အမ်ိန့်ရှိသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် စီးပွားရှာသည် မဟုတ်၊ သူတပါးကိုလည်း ရန်ပြုသည် မဟုတ်၊ ဟုတ်မှန်သော ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် အသက်ကို စွန့်၍ ဟုတ်မှန်သော တရားကို ဟောပြော ပါသည်။ ဘုရား၏ အလုပ်ကို လုပ်ပါသည်ဟု ဆိုပြီး တရားများကို ဟောပြောမြဲ အတိုင်း ဟောပြော လေသည်။ ၂
ထိုအခါ မလိုသူများက ဘုရင်ထံ ထပ်မံ လျောက်ထားကြလျှင် ရှင်ဘုရင် အမျက်ထွက်၍ ထိုဘုန်းကြီး နှစ်ပါးကို ရိုက်နှက်ပြီး နှင်ထုတ်ကြ။ သူတို့ကို သူတို့ တိုင်းပြည်သို့ ပြန်ပါစေ။ ၄င်းတို့ စီသွားသော လူတိုင်း၏ အိမ်များကို သွားရောက် ရှာဖွေရမည်။ ဘုရားနှင့် ဆိုင်သော အရာဝတ္တူများကို အကုန်သိမ်း၍ ယူခဲ့ရမည်ဟု အမိန့်ထုတ် သဖြင့် အမိန့်အတိုင်း အာဏာသားများသည် ရက်စက်စွာ ပြုလုပ်ကြသောကြောင့် ဘုန်းတော်ကြီး နှစ်ပါးတို့မှာ နေစရာ မရှိ ဒုက္ခ္ခ ဆင်းရဲကြီးစွာနှင့် မိမိတို့ နေရာမှ အနောက်မြောက်ဘက် သုံး လေးမိုင်ခန့် ကွာသော တောထဲသို့ ရွှေ့ပြောင်းကြပြီးသော် တရား အားထုတ် နေကြပြန်သည်။ ကျန်ရစ်သော တပြည့်တို့သည် မနေနိုင် ကြသဖြင့် တွေ့ရှိအောင် လိုက်လံ ရှာဖွေကြပြန်ရာ တောတွင်း၌ တွေ့ကြရ၏။ ဘုန်းတော်ကြီးများ သတင်းသုံး နေသော နေရာသည် မြေနိမ့် ချိုင့်ဝှမ်းသော နေရာဖြစ်သောကြောင့် ရွှံ့နွံနှင့် မြက်ပင်များ ထူထပ်ပြီး ခြင်များ အလွန် ပေါများလေသည်။ တွေ့ရှိသော တပြည့်တို့သည် အလွန် ၀မ်းနဲစွာ နှင့် ရွာသို့ ပြန်လာကြ၍ အကြောင်းမျိုးစုံကို မိမိတို့ အပေါင်း အသင်းတို့အား ပြောကြလေသည်။ သိရှိကြသမျှသော လူများတို့သည် စုဝေး ကြပြီး ကောင်းသော သဲမြေများကို လိုက်လံ ရှာဖွေကြရာ သဲရှိသော တောင်ပူဇာကလေး တစ်ခုကို တွေ့ရှိကြ သဖြင့် ထိုသဲမြေများကို တူးယူ၍ ထမ်းသူကထမ်း ရွက်သူကရွက် ကြပြီးလျှင် ဘုန်းကြီး နှစ်ပါးနေသော ကျောင်း ပတ်လည်၌ ရွံ့နွံများ၊ မြက်များ ခြင်များ ပျောက်ကင်း သက်သာခွင့် ရစေရန် ဖြန့်ဖြူး ခင်းကျင်း ဖို့ပေးကြလေသည်။ ထို သဲဖြူကလေးများ တူးယူသော နေရာသည် ချောင်း ဖြစ်နေသဖြင့် ၄င်းချောင်းကို သဲဖြူချောင်း ဟူ၍ ယခုတိုင် အမည်တွင်လေသည်။ ၃
ဘုန်းတောကြီး နှစ်ပါးသည် ၀တ္တရား မပျက်ဘဲ လူအများတို့အား တရား ရေအေး တိုက်ကျွေး ကြလေရာ လူပရိတ်သတ်များသည် ရှေးအထက်က ပိုများပြား လာလေသည်။ ထိုအချိန်တွင် မဟာမေဒင် ပသီဘာသာ အမျိုးသား ယောက်ျားပျို တစ်ယောက်သည် ဘုရင်ဂျီ ဘာသာထဲမှ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်နှင့် မေတ္တာ မျှကြသဖြင့် ယောက်ျားပျို၏ မိဘများသည် မိမိတို့ အမျိုးဘာသာကို စွန့်ပစ်မည်ကို စိုးရိမ်ကြ၍ ဆွေမျိုး တစ်စုတို့သည် ဘုန်းတော်ကြီးများကို သေခြင်းဖြင့်၎င်း ပြည်မှ နှင့်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ၄င်း ဖျောက်ဖျက်ရန် စီမံကြပြီးသော် မိမိတို့ အကြံ အောင်မြင်ရန် မနာလို နေကြသော သူများနှင့် ပေါင်းသင်းကြ၍ ဥရောပ တိုက်သား ဘုန်းကြီးများကို သီးခံနေကြပါလျှင် သင်တို့၏ သြဇာ ကိက္ကမနှင့် နောက်လိုက် နောက်ပါများတို့သည် မကြာမီ ဆုံးရှုံး ကုန်ကြလိမ့်မည်။ စသည်ဖြင့် စိုးရိမ်စိတ်နှင့် မနာလိုစိတ်ကို ထကြွစေရန် တိုက်တွန်း ပြောကြားကြလေသည်။ ၄
မနာလို ၀န်တိုသူများသည် သဘော တူညီကြပြီး နိုင်ငံခြား ဘာသာ အယူဝါဒကို ဟော၍ တိုင်းပြည်တွင် အနှောက်အယှက် ဖြစ်ပါသည်ဟု အမျိုးမျိုးသော စွပ်စွဲချက်များဖြင့် ရှင်ဘုရင်ထံ လျှေက်လွှာ တစ်စောင် တင်သွင်းကြလေသည်။ ၄င်းစာလွှာကို ဖတ်ပြီးနောက် ရှင်ဘုရင်သည် ဘုရင်ဂျီ ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးကို ဖမ်းဆီး၍ ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၆၉၃) ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့တွင် ဘုရင် ရှေ့တော်သို့ တင်သွင်းရန် အမိန့်ထုတ် ပြန်လိုက်သည်။ ဘုန်းတော်ကြီး ဂျောရက်သည် ရှင်ဘုရင်၏ အမိန့်ကို ခံယူရသည်နှင့် တပြိုင်နက် ဘုရင်၏ အမိန့်ကို ဆရာတော်ကြီး လာနော်ထံသို့ နောက်ဆုံး စာတစ်စောင် ရေးသား လျောက်ထားခဲ့သည်။ စာ၌ ရေးသားချက်သည်ကား မနက်ဖြန်၌ တပြည့်တော်တို့သည် ရှင်ဘုရင်၏ ရှေ့မှောက်သို့ အမိန့်အရ လိုက်ပါ သွားရတော့မည်။ တပြည့်တော်တို့ ပေါ်၌ စွပ်စွဲချက်မှာ ပဲခူးသား မြန်မာများနှင့် အခြား လူမျိုးခြားထဲမှ အယူဝါဒ ပြောင်းလဲစေသော ကိစ္စပင် ဖြစ်ပါသည်။ တပြည့်တော်တို့နှင့် အတူ မကွာ လိုက်ရန် စေလိုက်သော များစွာသော အစောင့်အကြပ် တို့သည် စိုးရိမ် ကြောက်ရွံ့ရန် အကြောင်းရှိသည်ဟု တပြည့်တော်တို့ကို သံသယ မကင်းဖြစ်စေပါသည်။ သို့ရာတွင် တပြည့်တော်တို့ အမှုထမ်းလျက်ရှိသော ဘုရားသခင်ကို တပြည့်တော်တို့ သိပါသည်။ တပြည့်တော်တို့ အားပေးမည့် လက္ခ္ခဏာရှိသော အပြစ်ဒဏ် စီရင်ခြင်းကြောင့် ခံရမည့် ဒုက္ခ္ခ္ခ ဆင်းရဲကို သီးခံခြင်းနှင့် ကြိုးစား၍ ခံထမ်းရန် တပြည့်တော်တို့၏ အပြစ်အတွက် ဒဏ်ခံနေသည့် အနေနှင့် ထာဝရ ဘုရားသခင်ကို ပူဇော်ပါသည် ဘုရားဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ၅
ဘုန်းတော်ကြီး နှစ်ပါးတို့သည် ဘုရင်ရှေ့တော်သို့ ရောက်ရှိသော အခါ ဘုရင်သည် အမျက် ပြင်းစွာ ထွက်သဖြင့် ထိုဘုန်းကြီး နှစ်ပါးကို သစ်ပင်ကြီးမှာ ကြိုးနှင် ချည်နှောင်ပြီး အစာရေစာ အငတ်ထား ၀တ်ဆင်ထားသော ၀တ်ရုံ သင်္ကန်းများ လှပ်ထားပြီးလျှင် ခြင်စာ ကျွေး၍ သတ်ရမည်ဟု အမိန့်ထုတ် လိုက်လေသည်။ အာဏာသား တို့သည် အမိန့်အတိုင်း ရက်စက်စွာ ပြုလုပ်ကြသဖြင့် တပြည့် ဖြစ်သူတို့သည် ထိုအချင်းအရာကို မြင်တွေ့ ကြသောအခါ ဟစ်အော် ငိုကြွေး ဆုတောင်း ကြလေသည်။ ဘုန်းတော်ကြီး နှစ်ပါးက ငါ့တပြည့်များတို့ မငိုကြနှင့် ၀မ်းမနည်းကြနှင့် မပူပင်ကြနှင့် ကမ္ဘာပေါ်၌ တွေ့ရသော ဒုက္ခသည် ဒုက္ခမဟုတ် တခဏသာ ဖြစ်သည်ဟုဆုို၍ တရား ရေအေး တိုက်ကျွေး တော်မူသည်။ ဘုန်းကြီး နှစ်ပါးတို့သည် သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁၃.၁၄.၁၅) ရက် နေ့ တိုင် (၃)ရက် တိတိမသေဘဲ ဒုက္ခ ခံကြရသည်ကို မလိုလားသူများသည် ရှင်ဘုရင်ထံ တိုင်ကြားကြပြန်သည်။ ထိုဘုန်းကြီး နှစ်ပါးတို့သည် သတ္တိကောင်းသော လူများဖြစ်ကြသည့် အတွက် (၃)ရက် တိုင်တိုင် မသေဘဲ ဒုက္ခခံလျက် နေကြသော်လည်း ဂရုမစိုက်ဘဲ ခံနေကြသည်ဟု ပြောကြလျှင် ရှင်ဘုရင်က သည်လောက် အစွမ်းကောင်းလျှင် ဂုံအိတ်တွင် ထည့်ပြီး သဲ အုတ်ခဲများဖြင့် ဖုံးဖိ၍ တင်းကြပ်စွာ ချည်နှောင်ပြီးသော် ချောင်းထဲသို့ ချစေဟု အမိန့်ထုတ်ပြန် လေသည်။ အမ်ိန့်အတိုင်း ပြုလုပ်ပြီး သကာလ ပဲခူးချောင်းထဲသို့ ပစ်ချ လိုက်ကြသည်။
ထို ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးကို ရေသို့ ပစ်ချ၍ ပျံလွန် တော်မူသော နေ့က စ၍ ယနေ့တိုင်အောင် ပဲခူးချောင်းကို ဇာမဏီချောင်းဟု တွင်လျက် ရှိသည်။ ဤအချိန်တွင် အုပ်စိုးသော မြန်မာ ရှင်ဘုရင်မှာ မြန်မာ ရာဇ၀င်အရ မင်းရဲကျော်ထင် ဖြစ်သည်။ ဇာမဏီချောင်းဟု အမည်တွင်ခြင်းမှာ ဘုန်းကြီး နှစ်ပါးက ဇာမဏီလူမျိုးများဟု ထင်မှတ် နေကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးမှာ ပြင်သစ်ပြည် ပါရီမြို့ နိုင်ငံခြား သာသနာပြုအသင်းမှ ပြင်သစ်လူမျိုး ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် ဂျေနုိူးနှင့် စစ္စလံပြည်သား ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် ဂျောရက်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ၆
ဘုန်းတော်ကြီး နှစ်ပါးတို့သည် (၃)ရက်လုံးလုံး နှိပ်စက် ညှင်းဆဲခြင်း အမျိုးမျိုးခံရပြီး နောက် သီတင်းကျွတ် လဆုပ် (၁) ရက် နေ့တွင် ချောင်းထဲသို့ ပစ်ချခံရသဖြင့် အသက်ကို စွန့်ကြရလေသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးတို့၏ တပည့် အားလုံးတို့သည် အလွန်တရာ စိတ် မချမ်းသာစရာ ပူဆွေးခြင်းနှင့် ဆီမီးများ ပန်းများနှင့် ဆုတောင်း မေတ္တာပြု ကြလေသည်။ ညအခါမှာ မူကား ရှားသားများကို ၀ါဂွမ်းနှင့် ပတ်၍ ဆီစိမ်ပြီးလျှင် ငှက်ပျောဖောင်၌ စိုက်၍ မီးထွန်းပြီး ဘုန်းကြီးနှစ်ပါး အသက်စွန့် အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် တချောင်းလုံး ပြည့်အောင် မျှောကြလေသည်။ သားစဉ် မြေးဆက် နှစ်စဉ်မပြတ် ထိုနေ့ ကျရောက်သောအခါ ဆီမီးများ မျှောကြရသည်။ ကျန်သော တပြည့်များသည်လည်း စိတ်ထင်တိုင်း ပြုလုပ်ကြသည်။ လူမမာများ ကလေးသူငယ် ရှိသော သူတို့သည် ဘုန်းကြီးများ နေခဲ့ဘူးသော ကျောင်းနေရာသို့ သွားကြ၍ ငိုသူ ငို မေတ္တာပို့သူ ပို့ ပြုလုပ်ကြပြီး ကျန်ရစ်သော ၀တ်ရုံ သင်္ကန်းများ သဲများကို ယူဆောင် ခဲ့ကြပြီးနောက် သဲများကို ဘမ်းတခု၌ ထည့်ကြပြီး လူမမာများ၏ အနားမှာ ထား၍ ဆေးကုကြသည်။ ၀န်ရုံ သင်္ကန်းများကိုလည်း ချည်မျှင်များ ထုတ်ယူပြီး လူတစ်ယောက်လျှင် ခုနှစ်ပင်စီ လက်မှာ ၄င်း၊ လည်ပင်းမှာ ၄င်း တပ်ချည်ထားကြသည်။ ၄င်းတို့၏ အယူအဆမှာ (၉၆) ပါးသော ရောဂါဝေဒနာများ ကင်းရှင်း၍ စုန်း ပယောဂများ နတ်ဆိုးများ မနှောက်ယှက် မနှိပ်စက်နိုင်ဟု အယူရှိကြသည်။၇
လူကြီး သူမများကလည်း သားစဉ် မြေးဆက် မှာထား ခဲ့ကြသည်။ ဤ ဇာမဏီချောင်းသည် သူတော်ကောင်းများ သွေးစွန်းထားသည့် အတွက် ဘယ်သော အခါမှ တိမ်ကော လိမ့်မည် မဟုတ်၊ ထိုချောင်းကို အမှီပြု၍ ကောက်ပဲသီးနှံ လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါ၊ မြေသြဇာကောင်း၍ အကျိုး ကျေးဇူး ခံစား ရလိမ့်မည်။ ငါတို့၏ ဘုရင်ဂျီ ဘာသာထုံးစံကို မပစ်ပယ်ကြနှင့် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးကို ခံစားရလိမ့်မည်။ ငါတို့အတွက် အသက်တော်များ စွန့်သွားခဲ့သော ကိုယ်တော် နှစ်ပါးတို့ကို သနားအောင့်မေ့ တမ်းတခြင်းနှင့် သေသည်တိုင်အောင် မမေ့ကြနှင့် ပြုကြမြဲ အစဉ်အလာကို သတိအမှတ်ရရန် အဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်ကြပါဟု မှာကြား စကားရပ်များ အတိုင်း ဇာမဏီ ချောင်းရိုး တလျောက်တွင် လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြရာ များစွာ အကျိုး ခံစားရသည်ကို အခြားအရပ်က လူများသည် တွေ့မြင်ကြ၍ အများ လာရောက် လုပ်ကိုင် နေထိုင် စားသောက်ကြလေသည်။ ဘာသပများသည် အမျိုးမျိုး နှိပ်စက်ကြ သဖြင့် ဘာသာဝင်များ နည်းပါး စပြုလာသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကျန်ရှိသော လူများကို နှောက်ယှက်၍ မရလျှင် အယူသီးသော ဘာသာ သိရလိမ့်မည်ဟု ကြိမ်းဝါး ပြီးသော် ဘုရင်ထံသွားရောက် ဂုံးချော လျောက်ထားကြသည် ဖြစ်၍ ရာဇဒဏ်နှင့် အမျိုးမျိုး နှိပ်စက်ခံရသည်က တကြောင်း တဖြည်းဖြည်း သေသူကသေ ဘာသာပျက်သူကပျက် အခွန်ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ထွက်ပြေးရသူကထွက် ပြေးရသည်က တကြောင်း ထိုအချိန်တွင် ရဟန်း ဘုန်းတော်ကြီးနှင့် မတွေ့ကြရသဖြင့် ဘာသာတရားကို မကျွမ်းကျင် နားမလည်ကြသောကြောင့် တကြောင်း ထင်သလိုဖြစ်ပြီးလျင် ဘာသာ ပျက်စီး ရလေသည်။ ဘုန်းတော်ကြီး နှစ်ပါးကို ပဲခူးမြစ်ထဲ ပစ်ချသည် နေရာမှာ ကား မီးရထားလမ်း သံတံတား၏ အထက်ပိုင်း နှစ်မိုင် ကွာတွင် ဖြစ်သည်။ ၈
ပြင်သစ်ပြည် ပါရီမြို့ နိုင်ငံခြား သာသနာပြု အသင်းဂိုဏ်းမှ ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ်ဂျေနိူးနှင့် ဖါသာရ် ဂျောရက်တို့သည် ယိုးဒယားမှ တဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ ခဲ့ကြသော်လည်း၊ အထက်မြန်မာနိုင်ငံ.....
၁။ ဦးချို၊ ဆရာ၊ နဘက်၏ မှတ်တမ်း။
၃။ (က) ဦးချို၊ ဆရာ၊ နဘက်၏ မှတ်တမ်း၊ (ခ) Bishop Usher, The History of Catholic Church in Burma
၄။ (က) ဦးချို၊ ဆရာ၊ နဘက်၏ မှတ်တမ်း၊ (ခ) Bishop Usher, The History of Catholic Church in Burma
၅။ ဦးချို၊ ဆရာ၊ နဘက် မှတ်တမ်း
၆။ (က) ဦးချို၊ ဆရာ၊ နဘက်၏ မှတ်တမ်း၊ (ခ) Bishop Usher, The History of Catholic Church in Burma
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 8:47 AM